ပြည်တွင်းမှာ စာစောင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုထုတ်ရသလဲ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ပြည်တွင်းမှာ စာစောင်တစ်ခုကို ဘယ်လိုထုတ်ရသလဲ	Posted by mm thinker on November 24, 2008
Posted in: Journalism, Media.	Tagged: Censorship, Journalism, Media.	Leaveacomment
တလောက ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာမီဒီယာတစ်ခုက ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတော့ ပြည်တွင်းမှာ ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်လာအောင် ထုတ်ရပုံ အဆင့်ဆင့်ကို စကားစပ်မိပြီး သူက တအံ့တသြ နားထောင်နေပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ ပြည်ပမှာ အဝေးရောက် မြန်မာဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့ တွေ့မိတိုင်း ဒီအကြောင်း မကြာခဏမေးဖြစ်ကြ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြည်ပမှာ စာစောင်တစ်ခု ထုတ်တာကတော့ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စနဲ့ စာနယ်ဇင်း အတတ်ပညာကလွဲလို့ ဘာမှ ခက်ခဲလောက်စရာမရှိပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ ကျတော့ စာနယ်ဇင်းပညာနဲ့ မသက်ဆိုင်သော စစ်သံပါသည့် ကြိမ်းမောင်းသံ၊ သေနတ်ပြောင်း၊ ထောင်နဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကို ရန်သူလို သဘောထားပြီး ဖိနှိပ်မှုတွေဟာ ပတ်ချာဝိုင်းနေတယ်။ အပြင်မှာ ကာလရှည်ကြာနေတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဆိုသူတွေ ခံစားဖူးမှ နားလည်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခါးစည်းခံရတဲ့ ဒုက္ခတွေပါ။ ပြည်တွင်းမှာ စာစောင်တစ်ခု ထွက်လာဖို့အရေး အခက်အခဲတွေကို စာဖတ်သူတွေသိအောင်ရော၊ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ အနေရောပါမက ပြည်ပကနေ သတင်းနံ့ပဲ ခံတတ်ပြီး သတင်း Source တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကြုံရမှုတွေကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဆိုသူတွေ ဖတ်ဖို့ပါ။
စာပေ စိစစ်ရေး စာပေဖက်ဆစ်ရုံးလို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဆင်ဆာရုံးဟာ ပြည်သူတွေကို မျက်စိဖွင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေ၊ ကောင်းကျိုးရစေမယ့် အချက်အလက်တွေကို မြှုပ်နှံရာ သင်္ချိုင်း သုဿန်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူတွေ မျက်စိမှောက်ပြီး အမှောင်ထဲရောက်အောင် သတင်းမှားတွေကို အကြပ်ကိုင်ထည့်ခိုင်းရာ၊ အဖိုးတန်စာမျက်နှာတွေကို ဖြုန်းတီးရာ ဌာနဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတွေကို တစ်ပုဒ်လုံးဖြုတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် တကယ့် သတင်းရဲ့ အနှစ်သာရပိုင်းကို အပိုဒ်လိုက် ဖြုတ်ခိုင်းတယ်။ အနှစ်သာရ မရှိတော့တဲ့ သတင်းမို့ အယ်ဒီတာက တစ်ပုဒ်လုံး ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရတာ များပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွေ ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပဲ။ တစ်ပုဒ်လုံးလည်း ဖြုတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ အပိုဒ်လိုက် နင်းကန်ဖြုတ်တော့ ဆောင်းပါးက တစ်ဝက်လောက်ပဲ ကျန်တတ်တယ်။ သတင်းဂျာနယ်တွေဟာ အဖြုတ်အခံရဆုံးပါပဲ။ တချို့သတင်းဂျာနယ်တွေဆို တကယ်ထုတ်မယ့် ဂျာနယ်ဆိုဒ်ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အခုတလော ကဗျာတွေကိုလည်း မဲပြီး ဖြုတ်ပစ်နေလို့ တချို့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ၂ ပုဒ်လောက်ပဲ ပါနိုင်တော့တယ်။ တချို့စာစောင်တွေဆို မတရား အဖြုတ်ခံရတော့ အင်္ဂါမစုံတဲ့ စာစောင်ဖြစ်သွားပြီး မထွက်ဘဲ နေလိုက်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။
စာစောင်ထွက်ပြီးလို့ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုက ပြဿနာရှာရင်၊ သူတို့ ပြောတုန်းက ပြောပြီး အထက်က ထုတော့မှ ပြာယာခတ်ရင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့လည်း မစားသာပါဘူး။ သူတို့က ခွင့်ပြုလို့ ထည့်ပြီးလည်း စာပေစိစစ်ရေးက တာဝန်မယူပါဘူး။ သူတို့ ခွင့်ပြုသလောက်ပဲ ထည့်ရတဲ့ အယ်ဒီတာတွကိုပဲ အပြစ်ပုံချကြတာများတယ်။ ခေါင်းရှောင်ပြီး သူတို့ ပြဿနာပေါ်တဲ့ ကြီးငယ်အလိုက် အယ်ဒီတာ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေကို ခေါ်ပြီး သူ့လခစားနေသလို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း၊ ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်း၊ စာနယ်ဇင်းသမားလုပ်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းတာကနေ ဖမ်းဆီး၊ အချုပ်ထဲပို့၊ ထောင်ထဲထည့်တာတွေအထိ လုပ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာကိုလည်း ကဗျာ အဓိပ္ပာယ်ကြောင့် ဖမ်းတယ်။ သတင်းသမားကိုလည်း သတင်းမှန်ရေးလို့ ဖမ်းတယ်။
ပြည်တွင်းက အယ်ဒီတာတစ်ဦးကတော့ စစ်အစိုးရဟာ သတင်းသမားတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ညှင်းပြီး သတ်နေတာလို့ ငြီးငြူကြကြောင်းပါ။ ခက်ထန်
← Development Culture, Knowledge and Alternative	အင်တာနက်မျိုးဆက်၊ Blogging, လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေး →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...